Inkcazo yegama elithi "Ukuhlambalaza"
Ukuhlambalaza ukuhlambalaza yinto eyenziwa ngokuzikhethela ngokubiza umfazi ingqungquthela, umhenyu okanye ukuguqula umlinganiso wakhe kwisigxina socansi ukuze abe neentloni, ukuhlazisa, ukwesabisa, ukuhlambalaza okanye ukuhlazisa ngenxa yezenzo okanye ukuziphatha okuqhelekileyo kwintlobano yesini.
Nangona isenzo sokuhlambalaza sisisigxina kuphela kwisini, amabhinqa onke ubudala - ukusuka kumantombazana ukuya kubantu abadala - bahlala bexhamla ukuhlambalaza okanye ukunyelisa enye intokazi.
I-Shamy-Shaming idla ngokuhambisana ne "intombazana entle" kodwa ayikuphela kwinqanaba elidala.
Ibali elihlazola kwiblogi ibonisa ukuba lo mkhuba ungenzeka njani kwizicwangciso ezingapheliyo:
[O] ilungu lecawa ... libizwa ngelinye ilungu "i-slut" ngenxa yezicathulo zokugqibela (ezabe yingxenye yeendleko zeHalloween) kunye nezithendele. Kwakuyihlazo ... [ebonisa] inyaniso ... ukuba nangona "ungumKristu olungileyo," ukuba nawe kwenzeka ukuba ugqoke iimpahla ezithile, uya kugxeka ngesondo ukuba ungumfazi.
Ukuhlambalaza i-Slut kwangena kuluntu ngo-2010 ngenxa yeziganeko ezimbini ezihlukeneyo: ukuzibulala kukaPeebe Prince, umfundi ophakamileyo wesikolo oye wahlaziswa gqitha ngabafundi afunda nabo ukuba waxhomeka; kwaye ukhetho lwangaphakathi luka-2010 apho abaviwa ababini beC Congressional, uChristine O'Donnell kunye noKrystal Ball, bahlaselwa yiwebhusayithi uGawker eyapapasha umntu ongeyena owaziwayo ngobusuku obuchithwe kunye no-O'Donnell kunye neefoto ezichanekileyo zeBhola kwiqela leKrisimesi elibonisa kunye neeshini zokudlala.
Ukuhlambalaza i-Slut kwavezwa kwakhona kwi -CBS uchungechunge Umfazi Olungileyo xa ibhinqa lomfazi lomfundi liye lavulwa ngumdlali wakhe. Kwisiqhelo esasibangelwa ngoNovemba 9, 2010, umviwa ubhekiselele ngqo kwimeko kwaye wabonisa ukuba wayengumdlavuza wesibeleko sombele owaye wagcina i-mastectomy yakhe imfihlakalo kwaye wayenokuhlinzwa ngokutsha kwebele ngokulandela unyango lomhlaza.
Eminye imizekelo yokuhlambalaza i-slut:
I-Slut ihlaziye umviwa - Ibali likaSam Bennet
Izinto Ezi-10 Azingazi Ngayo Abantwana abakhulelweyo eMelika
Amadoda, Amandla, kunye nokuxhatshazwa ngokwesondo - Kutheni amadoda anamandla ahlamba ngesondo abafazi
9 Izilwanyana Ezinezi Dinosaurs
Iingcaphu eziDumo zeDumo ziphefumlele isiHlomelo sakho
'Amanzi ngeendlovu' nguSara Gruen - I-Club Club Imibuzo Yemibuzo
Indlela Yokulungisa Ngokufanelekileyo Izixhobo Zesiko Nezobugqi
"Mack the Knife" Iingoma ngesiJamani